Dad badan oo ku dhintay dagaalkii Wisil iyo Galmudug oo ka hadashay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dad badan oo ku dhintay dagaalkii Wisil iyo Galmudug oo ka hadashay
Dad badan oo ku dhintay dagaalkii Wisil iyo Galmudug oo ka hadashay
Faah faahino ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin ku bilowday oo saaka ka dhacay deegaanka Wisil ee Gobolka Mudug.
Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray afaafka hore xero Ciidamada Dowladda iyo Daraawiishta Galmudug ku leeyihiin deegaanka Wisil. waxaana xigay weerar toos ahaa oo maleeshiyada Shabaabku ku beegsadeen xeradaasi.
Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in dagaal faraha looga gubtay uu halkaasi ku dhex maray ciidamadii la soo weeraray iyo maleeshiyada Al Shabaab, Shabaabkana markii dambe lagu khasbay inay dib u gurtaan.
Dagaalka ayaa gaystay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh oo labada dhinac iyo dad rayidba isugu jira, iyadoona ay dhinacyadu guulo ka kala sheegteen dagaalkaasi.
War ka soo baxay Ururka Al Shabaab ayaa lagu sheegay in dagaalka lagu dilay soddon iyo afar ka mid ah Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaa beeniyay sheegashada Al Shabaab ee ah inay weerarka ku dileen tiradaasi, isagoo taasi bedelkeedana sheegay in ciidamadu fashiliyeen weerarkaasi.
“Nimankaas jilibkaa loo dhigay, run ahaantii aad iyo aad baa wax loo gaarsiiyay. Anigu waxaan dhihi karaa firxadkoodii ayay hadda ciidamada sii baacsanayaan.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Falagle ayaa qiray inay jiraan laba askari oo dagaalka ku dhintay, sidoo kalena uu jiro khasaaro dadka rayidka ka soo gaaray dagaalkaasi, inkastoo aanu tiradoodu cayimin.
Si kastaba ha-ahaatee dadka reer Wisil ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof, oo u badan dhinacyadii dagaalamay.
Previous articlePuntland oo fagaare ku toogatay kow iyo labaatan nin oo Shabaab ahaa
Next articleHirshabelle oo haadaan ka tuurtay rajadii laga qabay in 60 cisho doorashada ku qabsoomto